St. Kitts & Nevis na -agọnarị ndị njem si Brazil, India, South Africa na UK
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Saint Kitts na Nevis » St. Kitts & Nevis na -agọnarị ndị njem si Brazil, India, South Africa na UK
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ Saint Kitts na Nevis • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Kitts & Nevis na -emelite ndụmọdụ ndụmọdụ njem maka ndị ọbịa si Brazil, India, South Africa na United Kingdom.
Kitts & Nevis ga -agọnarị ndị njem si Brazil, India, South Africa na UK.
Ndụmọdụ njem na -agbatị ruo Ọgọst 31, 2021.
St. & Nevis n'oge a. A gaghị ajụ ịbanye na Federation. Citizensmụ amaala na ndị bi na St. www.knatravelform.kn.
A ga-achọ ndị agbachitere ọgwụ mgbochi ruo izu abụọ ma ọ bụ karịa tupu ọbịbịa ha ịpụ iche maka ụbọchị anọ (4) mgbe ha rutere wee chere ule RT-PCR na-adịghị mma weere n'ụbọchị anọ (4), tupu enwee ike tọhapụ ha. ndebe iche. Citizensmụ amaala na ndị bi ebe ahụ agbabeghị ọgwụ mgbochi ọ bụla maka izu abụọ tupu ọbịbịa ha ga -achọ ịpụ iche maka ụbọchị 14 mgbe ha rutere.
Mkpebi ịgbatị ndụmọdụ a dabere na ndụmọdụ nke Ministry of Health na gọọmentị St. Kitts & Nevis tiri site na National COVID-19 Task Force maka ọdịmma nke ichebe ókèala ya na ahụike ụmụ amaala ya. Gọọmentị na-agbatị ndụmọdụ a na nzaghachi maka ụdị COVID-19 sitere na UK, Brazil, South Africa na India.
Nke kacha echegbu n'oge a bụ ụdị Delta. Federation nke St.
Ndị njem kwesịrị ịlele anya Kitlọ Ọrụ Njem Nleta St. Kitts na Ndị njem nlegharị anya Nevis weebụsaịtị maka mmelite na ozi.